Madaxda dhaqanka ee Gal-Mudug oo soo dhaweeyeen doorashadii ka dhacday Galmudug. – Radio Daljir
Agoosto 4, 2012 4:26 b 0
Gaalkacyo, Aug, 04- Nabadoon Cali Diiriye Aloore oo ka mida nabadoonnada GalMudug horayna u ahaa gudoomiyaha guddiga nabad-galyada ayaa isagoo jooga magaalada Muqdisho waxaa uu markii ugu horaysay soo dhaweeyay doorashadii ka qabsoontay GalMudug iyo Hogaanka loo dhiibay Maamulka.
Nabadoon Aloore oo waraysi siiyay Radio Daljir?ayaa sheegay in duubabka dhaqanku ay si wanaagsan ula shaqayn-doonaan maamulka uu madaxwaynaha ka yahay General Cabdi Xassan Cawaale (Qaybdiid), waxaana uu hadalkiisa raaciyay in doorashadaan inay nabad-ku dhacdo wax-garadku inuu qayb-mugleh uu ka qaatay.
Dhinaca kale,? Cali Diiriye Alloore?ayaa?tilmaamay inuu ka? rajaynayo madaxweynaha cusub ee GalMudug General Cabdi Qaybdiid inuu wax?ka qabto xaaladda ammaan ee?Gaalkacyo, isla markaana uu iskaashi dhaw oo dhanka amniga ah kala shaqeeyo maamulka Puntland.
Hadalka Nabadoon Aloore ayaa ku soo aadaya kaddib markii todobaadkii la soo dhaafay GalMudug ay ka dhacday doorasho madaxtinimo, ?taasoo?madaxwayne loogu doortay General Cabdi Xassan Cawaale Qaybdiid.
C/risaaq Cali (Silfar)
Radio Daljir Galkacyo.